Apple ayaa laga yaabaa inuu awood u yeesho inuu furo Bakhaarkiisa Apple ee Hindiya | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxaa laga yaabaa inay awood u yeelato inay furato Bakhaar ay ku kaydiso Apple oo ku yaal Hindiya
Apple waxay qorsheyneysaa inay furato tiisa Dukaamada Apple ee Hindiya ugu dambayn waxaa laga yaabaa inay midho dhalaan, warbixin cusub. Waxay sheegaysaa in dawladda Hindiya ay u badan tahay inay Apple siinayso ka dhaafitaan laba ama saddex sano sharciyada sahayda ee heer deegaan, si sameystaan ​​meelahooda iibka ah ee dalka. Dhibaatadu waxay tahay in sharciyada Hindiya, ay tahay in shirkadaha ajnebiga ahi ay helaan 30 boqolkiiba qaybaha deegaanka, iminkana kuma dhacdo arrinta Apple maaddaama ay wax soo saarkeeda badankeeda ku soo saarto Shiinaha.
Wadahadalka Apple si loo siiyo muddo nimco ah in la dhiso dukaanno maxalli ah, waxay leeyihiin horay ayey u bilaabmeen inta udhaxeysa 'Wasaaradda maaliyadda ee bariga dalka ' iyo 'Waaxda Siyaasadda Warshadaha iyo Dhiirrigelinta (DIPP)'.
Dhanka kale, waxay u muuqataa in Apple ay qaadaneyso fikradda ah in shaqo badan iyo wax soo saar ay ka sameyso dalkaas, oo ay ku jiraan xeedho lagu sameeyo dalka iyadoo la maalgashanayo $ 25 million xafiis cusub oo ku yaal Hindiya, iyo sidoo kale furitaanka xafiis cusub oo maxalli ah oo loogu talagalay Khariidadaha Apple. Mashaariicdan ayaa abuuri doona kumanaan shaqo oo cusub oo Hindiya ah, waxaa kale oo lagu xantaa in warshadaha qaarkood oo ay ku jiraan Foxconn iyo Pegatron laga yaabo inay furaan qayb ka mid ah wax soo saarka Hindiya, taasoo ah inay Apple ka dhigto mid u hoggaansanta sharciyada maxalliga ah, ama wax yar ka fududeynaya. Waxaan u qaadaneynaa booqashadii ugu dambeysay ee Tim Cook ilaa Hindiya waxay yeelatay saameyntii la rabay kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxaa laga yaabaa inay awood u yeelato inay furato Bakhaar ay ku kaydiso Apple oo ku yaal Hindiya
Apple Pay waxay imaan kartaa Switzerland Isbuuca soo socda
Ken Segall wuxuu ka hadlayaa Apple-ka hadda jira